पुरुष प्रधान समाजमा महिलाको जीवन - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारपुरुष प्रधान समाजमा महिलाको जीवन
March 8, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
21 औं शताब्दिमा पनि एक महिलाको जीवन घरभित्र हुन्छ। एक पुरूषको जीवन घरदेखि बाहिर हुन्छ। तपाईँको पत्नी अथवा प्रेमिका तपाईँको तुलनामा अधिक सफल हुनै सक्छन्। पुरुषले आफु प्रधान हुनलाई नारीको क्षमता, सक्षमता, प्रतीभामाथि लगान लगाउनु उचित हो र? एकदमै होइन। नारीलाई उपभोग गर्ने वस्तु सम्झने मानसिकता हटाउनुपर्छ। नारी अघि बढन सक्छ। जेम्स ब्राउनको गीत छ, उ भन्छ,- यो एक पुरूषको संसार हो, तर यहाँनेर केही हुँदैन, एक नारी बिना केही पनि हुँदैन।”
21 शताब्दि भनेर जो भन्छौं, के त्यो महिलाको लागि पनि त्यत्तिकै मर्यादाको शताब्दि हो, जतिको पुरुषको लागि हो? के समाज अझै पनि पुरूष प्रधान नै छ? मलाई सँधै लाग्छ, यो पुरूष प्रधान समाजमा म कसरी आफैंलाई सफल बनाऔं?
सफल बन्नको लागि पुरुषहरूलाई जति छुट र सुविधाहरू छन्, त्यति महिलालाई छैन। यसैले प्रतिस्पर्धाको प्रश्नमा पनि महिलाहरूले अनेकौं अडचन झेल्नुपर्छ।
हामीले जति नै ‘सबै ठिक छ’- भनेर सोँच्छौं (शायद सबै नहुन नै सक्छ) तर पनि हामी आफैंलाई उपभोग गर्ने वस्तु ठान्ने रूढिवाददेखि आफैंलाई छुटकारा गराउन सकिरहेका छैनौं। किन सकिरहेका छैनौं त? किन भने पितृसत्ता समाजको जरासम्मै जडित छ, हाबी छ।
आजको दशकमा पनि धेरैजस्ता नारी अहिले पनि घरभित्र नै बसेर नानीहरूको पालन-पोषण गर्नसम्म मात्र सिमित छन्। आफैंलाई घरको रक्षक, घरको भित्री कामको देखरेख गर्ने अनि आफ्नो जीवनको यही भूमिकामा उनीहरू खुशी पनि देखिन्छन्।
21 औं शताब्दिमा पनि एक महिलाको जीवन घरभित्र हुन्छ। एक पुरूषको जीवन घरदेखि बाहिर हुन्छ।
पुरुषलाई समाजद्वारा कुनै पनि शारीरिक वा भावनात्मक प्रकारले आफ्नो नानीहरूको हेरचाह गर्ने उत्तरदायित्व प्रदान गरिन्न। समाजले त्यो काम आमाको निम्ति छुट्याउँछ।
मलाई थाह छ, यस विषयमा मैले जति नै तर्क गरुँ, मलाई नै अन्यथा देखाउने कोशिश गरिन्छ। धेरै कमले मात्र सोँच्ने गर्छन्, माता अनि पिता समान हुन्। पुरुष अनि महिला समान हुन्। दुवैले कुनै पनि चीजमा सफल हुने क्षमता राख्दछन्। किनकी उनीहरू यी सबै रूढिवादद्वारा परिभाषित छैनन्।
मलाई ती सम्पूर्णमा घृणा छ, जसले अहिले पनि ती रूढिवादलाई पालन गर्छन्। महिला खाली भान्सा घरको निम्ति मात्र होइन। पुरूषले मात्र व्यवसायको दुनियाँमा पैसा कमाएका छैनन्। महिलाहरूलाई घरदेखि बाहिर मौका दियो भने पुरूष बराबरी अथवा अव्वल र सक्षम बन्न सक्छन्।
तपाईँको पत्नी अथवा प्रेमिका तपाईँको तुलनामा अधिक सफल हुनै सक्छन्।
के पुरुषलाई महिलाले आफबभन्दा बढ्ता सक्षमता प्रदर्शन गर्छ भन्ने भय हुन्छ? के कारण हो त जसले महिलालाई बाहिर मौका दिनबाट हरेक पुरुषप्रधान समाजले बाधा दिन्छ।
के उनीहरू डराउछन्? महिलाहरू आफ्नो जीवनमा पुरूषको तुलनामा अधिक सफल हुनसक्छ भनेर? महिलाले पुरुषको अहङ्कारलाई आहत गर्ला भनेर? त्यसो हो भने किन त महिलालाई उपभोगको वस्तुसरह ठानिन्छ?
पुरुषले आफु प्रधान हुनलाई नारीको क्षमता, सक्षमता, प्रतीभामाथि लगान लगाउनु उचित हो र?
मलाई कसैसित केही समस्य छैन, जसले पितृसत्ताले तयार पारेकै जीवन जानीबुझी जिउन चाहन्छन्। त्यो उसको छनौट हो। ‘चोइस्’ वा छटनौटको स्वाधिनता सबैलाई छ। यदि त्यो बँचाइले तपाईँ अनि तपाईँको परिवारको भलो हुन्छ भने ठिकै छ। त्यसलाई त्यही हिसाबले राख्नोस्। यो पनि बुझ्नुहोस्, कि तर एक नारीलाई धेरै कुरा गर्ने मौका दिएमा उसले संसारमा धेरै कुरा गर्न सक्छ।
नारीलाई उपभोग गर्ने वस्तु सम्झने मानसिकता हटाउनुपर्छ। नारी अघि बढन सक्छ।
जेम्स ब्राउनको गीत छ, उ भन्छ,- यो एक पुरूषको संसार हो, तर यहाँनेर केही हुँदैन, एक नारी बिना केही पनि हुँदैन।”